Na Na Na, Ray - Boys Love - Bl - Man Man - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Gbanahụ, Ray nkezi 4.2 / 5 si 21
NA / A, o nwere ihe nlere 37K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Weebụ, Yaoi
Maka Kile, ọ bụ ụbọchị nkịtị ka ọ na-arụ ọrụ ruo mgbe Lou na-abanye. Lou mechara nwee obi ụtọ-na-ekwu okwu Kile laghachi n’ebe ọ dị… ma ọ bụ ya bụ mgbe bọmbụ ahụ dara. “Nwa ejima unu anwuola. N'oge na-adịghị anya, ị ga-aghọ onye esemokwu. ” N'okwu ndị a, ndụ nkịtị Kile na-atụgharị anya. Dị ka telekinetic ike na-amalite na-egosipụta, ahụ ya na-enweta ahụ ọkụ. N'ịbụ onye ihe mgbu wutere, ọ na-achọta naanị ihe ga-eme ka obi dajụọ ya bụ aka Lou… Ma, ọtụtụ ihe ka na-akọwaghị. Kedu ihe Lou chọrọ? Kedu ihe bụ mmekọrịta ya na Ray, nwanne ejima Kile?
Ọtụtụ nnukwu fantasy na romance Anime yaoi mmekọahụ ebe a!
Isi nke 29 Ọgwụgwụ ss1 April 20, 2021
Ejima nke Labyrinth
Star Right Now (Na Na Na)